यी ११ खाद्यपदार्थले बढाउँछ स्मरण शक्ति !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी ११ खाद्यपदार्थले बढाउँछ स्मरण शक्ति !!
यस्तै विभिन्न खानाले तपाईँको दिमाग स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। केही खानाहरू, जस्तै फल र तरकारी, साथ साथै चिया र कफीमा एन्टिआक्सीडन्ट छ । जसले तपाईँको मस्तिष्कलाई क्षतिबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। नट र अण्डाहरूमा पोषण तत्त्व हुन्छन् जसले मेमोरी र मस्तिष्कको विकासलाई समर्थन गर्दछ। मस्तिष्कको स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्न र सतर्कता, मेमोरी र मुडलाई बढवा दिन सकिन्छ । रणनीतिक रूपमा तपाईँको भोजनमा यी खाद्य पदार्थहरू समावेश गर्नु जरुरी छ । मकालु खबर बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 21 = 28